ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ ၉ဝဝဝ ကျော် ရေဘေးသင့်၊ တစ်ဦး သေဆုံး
လှိုင်းဘွဲ့တွင် လမ်းပိတ်သည့် ပြဿနာအပေါ် အချင်းများခဲ့ပြီးနောက် တူမီးသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် ရဲတပ်သားသေဆုံး
လှိုင်းဘွဲ့၊ ဇူလိုင် ၁၆ လှိုင်းဘွဲ့မြို့ နယ်အတွင်း လမ်းပိတ်နေသည့်ကိစ္စ အချင်းများခဲ့သည်ကို မကျေနပ်ရာမှ ရဲတပ်သားအား တူမီးသေနတ် ဖြင့် ပစ်သတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ရှမ်းရွာသစ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲတပ်သား စောလင်းထက်ဦးသည် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်...
မူဆယ်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားကို ကားမောင်းလာသူက ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် လိုက်လံ ပစ်သတ်
မူဆယ်၊ ဇူလိုင် ၁၆ မူဆယ်မြို့ပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ တရုတ်နိုင်ငံသားကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကားမောင်းလာသူက ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့်လိုက်လံပစ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်မြို့၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ ၄၅...
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၅ လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်၌ အဂတိမှုဖြင့် အရေးယူခံရသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမျှမရှိကြောင်းသိရသည်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့ တော်စည်ပင်၏ ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယခုအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် အ ရေးယူခံရသော စည်ပင်ဝန်ထမ်းအရေအတွက် မည်မျှရှိသည်ကို...
မုန်းချောင်းနံဘေးရှိ ကျေးရွာအချို့၌ နှစ်စဉ်ကမ်းပြိုမှု အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရ၍ ရေကာတာများ တည်ဆောက်ပေးနေ
ပွင့်ဖြူ၊ ဇူလိုင် ၁၅ မုန်းချောင်းနံဘေးရှိ ကျေးရွာအချို့၌ နှစ်စဉ်ကမ်းပြိုမှုအန္တရာယ်များကြုံတွေ့နေရသည့်အတွက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရေထိန်းရေကာတာများတည်ဆောက် ပေးနေကြောင်း သိရသည်။ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း မုန်းချောင်းနံဘေးကျေးရွာများဖြစ်သည့် ရွာထောင်ကျေးရွာ၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာနှင့် မင်းမြေကျေးရွာတို့၌ နှစ်စဉ် ကမ်းပြိုမှုအန္တရာယ်များကြုံတွေ့နေရသည့်အတွက်...
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၅ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်နှင့် တိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးအဖြစ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်လှမြင့်တို့သည် ဇူလိုင် ၁၅ ရက် နံနက် ပိုင်းကကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂ဝ၁၉) (တတိယနေ့)တွင်...
မုံရွာ၊ ဇူလိုင် ၁၅ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဒီပဲယင်းမြို့နယ်ဆင် ရောက်ကုန်းရွာရှိ အလယ်တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၃၆ ဦး ၎င်းင်းတို့ကျေးရွာ၌ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှထုတ်ပြန် သောစာအား ပြန်လည်ဖျက်သိမ်း ပေးရေးအတွက် ကျောင်းသားများနှင့် ဒေသခံ...
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေးနှင့် Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် မကွေး၊ ပုသိမ်၊ ဘားအံနှင့် လားရှိုးမြို့များမှ ဒေသခံပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
မကွေး၊ ဇူလိုင် ၁၄ သက်ငယ်မု ဒိမ်းမှုပပျောက်ရေးနှင့် Justice for Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် ရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ဇူလိုင် ၁၄ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပုသိမ်၊ ဘားအံ၊ မကွေးနှင့် လားရှိုး မြို့များ၌ကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။...
စစ်ကိုင်းမြို့ပေါ်နှင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှ ဝါဆိုသံဃာ ၈၇၃ ပါးနှင့် သီလရှင် ၄၅ ပါးတို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်း လှူဖွယ်ပစ္စည်းဆက်ကပ်
စစ်ကိုင်း၊ ဇူလိုင် ၁၄ စစ်ကိုင်း ခရိုင်စီခံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကကြီးမှူး၍ စစ်ကိုင်းမြို့ပေါ်နှင့် စစ်ကိုင်း တောင်ရိုးတွင် ဝါဆိုဝါကပ်တော်မူ ကြသော သံဃာတော်အရှင်သူ မြတ်များနှင့် သီလရှင်များကို ဇူလိုင် ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီမှစတင်၍ စစ်ကိုင်းမြို့မဟာစည်းခုံကြီး...
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ တောင်ပြုံးကြီးကျေးရွာ ၌ကျင်းပမည့် တောင်ပြုန်းပွဲတော်အတွက် ဆိုင်ခန်းနေရာပေါင်း ၉ဝဝ ကျော်ကို ဇူလိုင် ၂ဝ ရက်မှ စတင်ချထားပေးသွားမည်ဖြစ် ပြီး ဆိုင်ခန်းဈေးနှုန်းများကို ရောင်းချလို သော...
ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်း ဒလတံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ သြဂုတ်ပထမအပတ်စတင်မည်၊ ဘုန်းကြီးလမ်းကို ပိတ်မည်မဟုတ်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၃-ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းရှိ ဒလတံတားတည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကို သြဂုတ်ပထမအပတ်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဘုန်း ကြီးလမ်းတစ်လျှောက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဒလတံတားစီမံကိန်း ပြီးစီးသည်အထိ လမ်းအလယ်တွင်နေရာယူ၍တည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်ကာ လမ်းကိုပိတ်ဆို့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊...
Page 1 of 186 12… 186 Next
ရန်ကုန် စာအုပ်လမ်း ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်စတင်
ဘင်္ဂါလီအရေး ကုလသမဂ္ဂ အရေးယူ ဆုံးဖြတ်ချက် တရုတ်နှင့် ရုရှား ကန့်ကွက်
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ကမ်းပြို ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်?
ငှားရမ်းထားသည့် မြေဧက ၁၄ဝဝဝ ကျော်ကို စစ်ဆေးရာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်သဖြင်?
အလားအလာကောင်းများထက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တင်းမာမှုများကိုသာ နို??
မြန်မာကြက်တောင် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ အိုလံပစ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အဆင့် ၃၄ တွင် ရပ်တည်နေ
အခြားသူ၏ ငွေစာရင်းထဲမှ ကျပ်သိန်း၂ဝဝဝ ကျော်ကို ရည်းစားထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဧရာဝတီဘဏ် စာရေးမကို အမှုဖွင့်
Share 1680 Tweet 0